nataon'i Josepf Tkach - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Ny fanompoam-pivavahana dia valin-kafatra noforonin’Andriamanitra ho an’ny voninahitr’Andriamanitra. Entanin’ny fitiavan’Andriamanitra izany ary mipoitra avy amin’ny fanambaran’Andriamanitra ny tenany ho amin’ny zavaboariny. Eo amin’ny fanompoam-pivavahana, ny mino dia miditra amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra Ray amin’ny alalan’i Jesoa Kristy izay mpanelanelana amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Ny fanompoam-pivavahana koa dia midika fa manetry tena sy amim-pifaliana no ataontsika loha laharana amin’ny zava-drehetra Andriamanitra. Maneho ny tenany amin’ny fihetsika sy fihetsika toy ny: vavaka, fiderana, fankalazana, fahalalahan-tanana, famindram-po mavitrika, fibebahana. (Jaona 4,23; 1. Johannes 4,19; Filipianina 2,5- enina ambin'ny folo; 1. Petrus 2,9-10; Efesianina 5,18-20; Kolosiana 3,16-17; Romana 5,8-11; 12,1; Hebreo 12,28; 13,15-16) Gott mit Anbetung antworten Wir antworten Gott mit…
Vakio bebe kokoa ➜
HEVITRA FITENY JOSEPH TKACH
Miaraka amin'ny fo vaovao amin'ny taom-baovao!
John Bell dia nanana fahafahana hanao zavatra izay antenaiko fa tsy ho vitan'ny ankamaroantsika mihitsy: mihazona ny fony eo an-tanany. Roa taona lasa izay, dia nanao fandidiana fo izy, izay nahomby. Noho ny fandaharan'ny Heart to Heart ao amin'ny Baylor University Medical Center any Dallas, dia afaka nitazona ny fo izay nitazona azy ho velona nandritra ny 70 taona izy talohan'ny nilana azy hosoloina. Ity tantara mahagaga ity dia mampahatsiahy ahy ny fifindran'ny foko. Tsy famindran-po "ara-batana" izany - ny mpanara-dia an'i Kristy rehetra dia niaina ny dikan-teny ara-panahy tamin'ilay dingana. Ny zava-misy feno habibiana amin’ny maha mpanota antsika dia ny mahatonga ny fahafatesana ara-panahy. Nanazava toy izao i Jeremia mpaminany: “Ny fo dia mafy hatoka sy reraka; iza no mahafantatra izany Üs: marary efa ho faty izy]?” (Jer. 17,9).
Rehefa miatrika ny zava-misy ny "fontsika fo" ara-panahy dia sarotra ny maka sary an-tsaina mbola manana fanantenana. Aotra ny fahafahantsika ho tafavoaka velona. Fa ny zava-mahatalanjona mitranga amintsika: Jesosy manome antsika ny mety ihany mety hanana fiainana ara-panahy: famindrana fo lalina ao anaty ...
Taona vitsy lasa izay, 9 taona ny mpanao hatsikana iray izay nalaza tamin'ny teny mampihomehy1. Daty nahaterahana. Namory ny namany sy ny havany rehetra ny hetsika ary natrehin’ny mpanao gazety. Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin’ny lanonana, ny fanontaniana azo vinaniana sy manan-danja indrindra ho azy dia ny hoe: “An’iza na inona no lazainao fa lava ny androm-piainanao?” Tsy nisalasala ilay mpanao hatsikana namaly hoe: “Mifofofofo! Iza no tsy mitovy hevitra?
Azontsika atao ny milaza zavatra mitovy amin'ny heviny ara-panahy. Tahaka ny fofonain'ny rivotra, ny fiainana ara-panahy rehetra dia miankina amin'ny Fanahy Masina na ny "fofonaina" ihany. Ny teny grika hoe fanahy dia "pneuma", izay azo adika hoe rivotra na fofonaina.
Ny apostoly Paoly dia mamaritra ny fiainana ao amin’ny Fanahy Masina amin’izao teny izao: “Fa izay araka ny nofo dia araka ny nofo; fa izay araka ny fanahy kosa dia misaina araka ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, ary ny fihevitry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana” (Rom 8,5- iray).
Ny Fanahy Masina dia mitoetra ao amin'ireo izay mino ny filazantsara, ny vaovao mahafaly. Io fanahy io dia mamoa amin'ny fiainan'ny mpino: «Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, faharetana, hatsaram-panahy, hatsaram-po, fahatokiana, fahalemem-panahy, ...